Ny fanavakavahana ara-pananahana sy ny fankahalàna vehivavy tamin’ny seho resaka tao amin’ny TV pakistaney · Global Voices teny Malagasy
Lasa haza mora ao amin'ny haino aman-jery pakistaney ny vehivavy
Voadika ny 17 Avrily 2020 6:16 GMT
Didkasary tamin'ny YouTube avy tamin'ny Yamaan TV. Ilay mpanoratra tantara drama Khalil ur Rehman Qamar (faharoa avy any ankavia ) sy ilay mpiaro ny zon'olombelona, Marvi Sirmed (fahefatra avy any ankavia) tao amin'ny seho resaka (talk show) momba ny ‘Aurat Azadi’ tamin'ny fantsom-pahitalavitra NEO TV ny volana martsa 2020.
Lasa resa-be indray any Pakistana ny fanavakavahana ara-pananahana, ny fankahalàna vehivavy ary ny fampiasàna teny mandratra natao tamin'ireo vehivavy vahinin'ny seho resaka, taorian'ny adihevitra henjana iray tao amin'ny fantsom-pahitalavitra NEO TV tamin'ny 4 Martsa 2020 nifanaovan'i Khalil-ur-Rehman Qamar, mpamorona sady mpanatontosa ilay fandaharana sy i Marvi Sirmed mpiaro ny zon'olombelona. Momba ilay teny filamatra hoe ‘ Mera Jism, Meri Marzi ‘ (Ny tenako, Ny safidiko), izay nampiasaina tamin'ilay Diaben'ny Aurat tamin'ny 2019 no nifantohan'ny adihevitra mafanan'izy roa ireo. Taratry ny fitakiana fanomezàm-pahefàna ny vehivavy io teny filamatra io nefa ihany koa nanatonga ny fanoherana mahery vaika avy amin'ireo vondrona sasany fatra-pifikitra amin'ny nentindrazana .
Vakio misimisy kokoa : Manapaka ny fahefan-dehilahy any Pakistana ny Diaben'ny Aurat
Vao haingana, nasain'ireo fantsom-baovao isankarazany i Khalil-ur-Rehman Qamar, mpanatontosa sarimihetsika drama noho ny fahombiazan'ilay andian-tantara drama Meray Paas Tum Ho mandeha amin'ny TV. Nohamafisiny nandritra ireo fandaharana fa izy no lehibe indrindra amin'ny mpiaro ny tombotsoan'ny vehivavy manerantany. Na dia nahazo fampianarana momba ny fiarovana ny zon'ny vehivavy sy fiarovana ny tombotsoan'ny vehivavy tamin'ilay mpikatroka Tahira Abdullah aza izy tamin'ny fandaharana iray.
Nahatonga fifanoheran-kevitra tamin'i Marvi Sirmed izay niavaka tamin'ny fampiasàna teny mandratra sy tsy voahevitra ireo fanambarany momba ny Diaben'ny Aurat. Nalaza be tamin'ny haino aman-jery sosialy ny lahatsarin'ilay adihevitra ary betsaka ireo vovonana nanakiana izany mafy. Nangatahana ny Manam-pahefana pakistaney mpandrindra ny Haino aman-jery elektrônika (PEMRA) mba handrara an'i Qamar tsy hiseho amin'ny TV intsony. Hatramin'ny Vaomiera mpiaro ny zon'olombelona any Pakistana aza dia nitaky fialàntsiny. Namoaka taratasy fampitandremana ho an'ilay fantsona ny PEMRA ary nanoratra fialàntsiny tao amin'ny Twitter ny filohan'ilay fantsona.
Nibitsika fialantsiny ilay mpanolotra ny fandaharana Ayesha Ehtisham :
Niala tsiny tamin'i Marvi Sirmed ihany koa ny lehiben'ny NEO TV :
@marvisirmed Miala tsiny aminao aho noho ilay zava-nitranga androany teo amin'ny fahitalavitray. Amin'ny maha-lehiben'ny NEO NEWS ahy dia manao azafady ny amin'iny zava-niseho iny aho ary hisy fepetra hentitra ho raisina. Melohanay ny fihetsik'i Khalil Qamar.
Tale mpanatanteraky ny
Nomelohin'ny loholona Sherry Rehman avy amin'ny Antokon'ny vahoaka pakistaney tao amin'ny antenimieran-doholona ilay tranga ary nandà tsy nety hanatrika fandaharana tao amin'ny NEO TV izy mandra-pisian'ny fialàntsinin'ny mpitantana.
Tsy hanaiky hiseho amin'ny @NeoTv_Network intsony aho raha tsy miala tsiny ilay mpanolotra fandaharana ary tsy avela hiseho intsony ity lehilahy tafahoatra ity. Mety ho voasazy raha toa ka ny hafa (lehilahy na vehivavy) no manao tahaka ireny rehefa angatahana haneho ireny karazana tsy fanajàna vehivavy ireny. Ny zon'ny vehivavy dia zon'olombelona. Ampy izay ny amin'ity tsy fahamendrehana ity https://t.co/YAJlmawCXF
Ny 5 Martsa, notapahan'ny Geo TV ihany koa ny fifanarahana tamin'i Qamar, nankasitrahan'ny maro mpisera amin'ny haino aman-jery sosialy izany :
— HarPal Geo (@HarPalGeoTv) March 5, 2020/
Fanambaràna 📢 pic.twitter.com/B5xbIX99uT
Ny tena mahaliana amin'izany rehetra izany dia tsy vao voalohany no nisy fandaharana nisehoana fifamaliana mahery teo amina lehilahy sy vehivavy tahaka izao tamin'ny TV, ary heverin'ny sasany fa ara-dalàna izany. Ny vehivavy rehetra miasa amin'ny fiarovana ny zon'ny vehivavy, ny zon'ny ankizy na olana ara-tsosialy ka asain'ny fantsom-pahitalavitra dia tsy maintsy miomana hiatrika tsikera manala baraka sy fitondrantena tsy mendrika, ary amin'ny ankapobeny, tsy mahafehy ny toe-draharaha ireo mpanolotra fandaharana.
Fitondrantena tsy mendrika ataon'ireo lehilahy ao amin'ny fahitalavitra
Na eo aza ny tantara lavarenin'ny fandraisan'ny vehivavy anjara amin'ny tontolo politika, ny sasany amin'ireo sehatra mpandala ny nentin-drazana any Pakistana dia manohy mampivelatra ny soatoavin'ny fahefan-dehilahy ary hita taratra matetika any amin'ny fandaharan'ireo fahitalavitra izany.
Eny fa na ny praiminisitra teo aloha Benazir Bhutto aza dia lasibatry ny kabary fankahalàna sy fanaratsiana nandritra ny nifaninanany tamin'ny fifidianana 1990 rehefa nandrindra fampielezan-kevitra nanala baraka azy ilay mpifaninana taminy, ny praiminisitra taloha Nawaz Sharif :
Voalakon'ny fanontanian'ireo mpanolotra fandaharana hafa ihany koa ny amin'ny finoany ilay mpiaro ny zon'olombelona Farzana Bari, rehefa niresaka ny maha-zava-dehibe ny Volavolan-dalàna ho fiarovana ny vehivavy.
Tamin'ny 2016, tao amin'ny fandaharana iray hafa tamin'ny fahitalavitra, nandao ilay fandaharana tamin-katezerana i Maulana Hafiz Hamdullah Saboor avy amin'ny Jamiat Ulema-e-Islam (F) rehefa nanandrana ny hamely ilay mpanolotra fandaharana, Fareeha Idrees. Tsy tanterany anefa izany satria vitan'ilay ramatoa mpanolotra fandaharana hatrany ny namaly ireo fanontaniany.
Nandray anjara tamin'ny adihevitra momba ny fanambadian'ny ankizy aloha loatra tamin'ny 2016 i Fauzia Viqar, sy Farzana Bari mpiaro ny zon'ny vehivavy, raha nampangain'ireo lehilahy, vahiny nasaina, ho manohitra ny fampianarana silamo.
Na dia tranga mahazatra ihany koa aza ireo karazana fifamelezana eo amin'ny samy lehilahy, dia haza mora ho an'ny lehilahy ny vehivavy any Pakistana. Ny minitra hitenenan'ny vehivavy dia tsy maintsy hisedràny fanoherana, na amin'ny sehatry ny aterineto na ivelan'ny aterineto. Na efa aza anefa ny tranga tahaka izany tanaty fandaharan'ny fahitalavitra, dia nampangidy rora no sady hita ho manamarina ny hetsika firaisankina tahaka ny Diaben'ny Aurat ilay adihevitra malaza ratsy manala baraka nahatafiditra an'i Qamar.